UTim Cook udibana neMacron eFrance namhlanje | Ndisuka mac
UTim Cook udibana noMacron eFrance namhlanje
UTim Cook uye kumhlaba wase-Yuropu kwindibano enkulu nomongameli wangoku weRiphabhlikhi yaseFrance, UEmanuel Macron. Ukutyunjwa kuya kwenzeka namhlanje ngenjikalanga, malunga ne-16.15: XNUMX ngokuhlwa, e-Elysee Palace, isihlalo esiqhelekileyo sobongameli beRiphabliki kunye nendawo yokuhlala kamongameli onyuliweyo.
Intlanganiso la madoda mabini aya kubangela ulindelo olukhulu, kuba baya kutshintshana ngezimvo ngemiba eyahlukeneyo, enje ngekamva lobuchwepheshe beli lizwe, iirhafu eziza kuhlawulwa kuRhulumente, imigaqo-nkqubo yaseYurophu neenkampani zecandelo, kunye nokunye okuninzi okungakhange kutyhilwe esidlangalaleni.
IFransi yenye yelizwekazi laseYurophu elinobunzima obukhulu kumaziko aseYurophu (kunye neJamani), kunye nelinye lawona mazwe anokusebenzisa kakhulu itekhnoloji yeApple. Ngesi sizathu, uTim Cook usemntwini namhlanje phambi kweMacron, ukuze azibonele ngokwakhe uluvo olukhoyo kuyo yonke le micimbi kwelinye icala leAtlantic.
Enye yezona zinto zixhalabisa inkokeli yenkampani yaseNyakatho Melika, lunyango lwezibophelelo zerhafu neYurophu, Into ebisoloko inika abafana kwiCupertino yintloko kangangexesha elithile.
Ngokuqinisekileyo iMacron izakugcina indawo yayo eqinileyo ukuza kuthi ga ngoku, apho ikhusela khona ukuba ilizwe laseFrance linokhuphiswano olukhulu ngokwentlawulo yeenkampani. Into apho uCook aza kuzama ukumnqanda, kuba i-CEO yenkampani yaseCalifornia ikhetha ukugcina izibonelelo zerhafu ezikhoyo.
Ngaphandle kwamathandabuzo, intlanganiso ebalulekileyo kuwo omabini amacala. Mhlawumbi ikamva lenkampani elikumhlaba waseYurophu liya kuxhomekeka kuyo, kuba lithemba ubunzima bomongameli wase-France Kuwo wonke umanyano lwe-European Union ukukholisa abanye abantu ukuba iinjongo zika-Apple zezona zilungele onke amaqela achaphazelekayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » UTim Cook udibana noMacron eFrance namhlanje